dayactirka sanduuqa qalabka xamuulka, dayactirka sanduuqa jiilaalka
boorsada lagu qaado iyo dayactirka sanduuqa qalabka xardhan ee galmada
Sidee loo ilaaliyaa sanduuqa gear?
Ka dib markii loo adeegsado sanduuq cusub oo gearbox ah qiyaastii saacadaha 400 ama bilaha 3, jilidda ayaa u baahan in la beddelo. Afterthat, wareegga beddelka saliiddu waa qiyaastii saacad kasta oo 4000 ah; fadlan haku darin-adeegso noocyo kala duwan oo saliidayn ah. Waa inay ku haysaa qadar ku filan oo saliid ah guriga sanduuqa gear-ka oo ay si joogto ah u hubiso. Markii la ogaado in saliiddu ku xumaatay ama xaddiga uu yaraaday, jiliddu waa in la beddelaa ama la buuxiyaa waqti.
Maxaan samaynaa marka sanduuqa gear-ku uu burburayo?
Markay gearboxku burburayaan, ha kala bixin qaybaha marka hore. Fadlan la xiriir wakiilka qaraabada iibka ah ee Waaxdayada Ganacsiga Dibadda oo aad u keento macluumaadka ku qoran magaca magaca, sida khaaska ah gearbox ans lambarka taxanaha; waqtiga la isticmaalay; nooca cilladaha iyo sidoo kale tirada kuwa dhibaatada leh. Ugu dambeyntii qaado tallaabada ku habboon.
Sidee loo kaydin karaa sanduuqa gear?
a) laga ilaaliyo roobka, barafka, huurka, boodhka iyo saamaynta.
b) Saar alwaax alwaax ah ama shey kale oo u dhexeeya sanduuqa gear iyo dhulka.
c) Qeybaha furitaanka laakiin aan la isticmaalin waa in lagu daraa saliida lidka-miridhku dushiisa, ka dibna ku soo laabto weelka waqtiga.
d) Haddii sanduuqa gaasku uu keydsanaa 2 sano ama xitaa ka badan, fadlan hubi nadaafadda iyo waxyeelada farsamo iyo in lakabka ka hortagga miridhku weli ku jiro inta lagu jiro baaritaanka caadiga ah.
Maxaan samaynaa markii aan caadi ahayn oo xitaa buuq ay dhacdo inta lagu gudajiro sanduuqa qalabka socda?
Waxaa si sax ah u sabab u ah mesh aan sinnayn ee u dhexeeya giraha ama dhalmada ayaa dhaawacan. Xalka ugu macquulsan ayaa ah in la hubiyo saliidaha iyo in wax laga beddelo xididdada. Intaa waxaa sii dheer, sidoo kale waxaad weydiisan kartaa wakiilkayaga iibka si uu kugula taliyo.
Maxaan ka qaban karnaa baxsiga saliida?
Ku adkee xidhmooyinka dusha sare sanduuqa gear ka dibna fiiri qaybta. Haddii saliiddu wali sii daato, fadlan la xiriir wakiilkeena iibka ee Waaxda Ganacsiga Dibadda.
Waa kuwee warshadaha loo adeegsado bokisyada aad ku adeegtaan?
Bokisyadayada ayaa si balaadhan looga isticmaalaa meelaha ay ka mid yihiin dhar-ka-samaynta, warshadaynta cuntada, cabitaanka, warshadaha kiimikada, qalabka kor u qaadida, qalabka kaydinta otomaatiga, macdanta, tabacco, ilaalinta deegaanka, saadka iyo iwm.
Miyaad iibisaa matoorrada?
Waxaan leenahay alaab-qeybiyeyaal deggan oo xasillanaa muddo dheer. Waxay ku siin karaan matoor tayo sare leh.
Waa maxay xilliga dagaalka wax soo saarkaagu?
Waxaan bixinaa hal sano oo dagaal tan iyo taariikhda markabkii uu ka tagey Shiinaha.
Su'aal kasta ha noqotee? Naga soo raac!
Noocyada gawaarida korantada
Gawaarida Induction, AC Motor
Xawaaraha isku-beddelka xawaaraha
Qalabka Gargaarka, Qalabka Dameerka, Qalabka Diyaaradaha, Gawaarida Diyaaradaha, Gawaarida Duulista, Gawaarida Gawaarida Beerka, Gawaarida Worm, Gawaarida Naafada
Noocyada sanduuq geedka leh sawirro
Qalabka Gargaarka, Qalabka Feejiyada beedka, Bevel gear
Isku-darka gawaarida korantada iyo qalabka wax lagu xiro
Nooca cycloomka Sumitomo
Hoos u dhig santuuqa qalabka korantada
Qalabka beedka wareega, Bevel gear